काेराेना विरुद्ध होमियोप्याथिक औषधि बाँडिंदै, चिकित्सक भन्छन्– घातक हुनसक्छ
रिपोर्ट आइतबार, जेठ १८, २०७७
मारवाडी सेवा समितिले कोरोनाभाइरस संक्रमण हुन नदिन प्रतिरोधी क्षमता बढाउने र संक्रमितलाई पनि निको पार्ने भन्दै होमियोप्याथिक औषधि निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ। चिकित्सकहरू भने परीक्षणविना औषधिको प्रयोग गरिनु घातक हुने बताउँछन्।
कोरोनाभाइरस (कोभिड—१९) रोकथाम गर्ने तथा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने भन्दै मारवाडी सेवा समितिले होमियोप्याथिक औषधि आर्सेनिकम एल्बम ३०सी धमाधम वितरण गरिरहेको छ।
सरकारी निकाय, स्थानीय तह वा संघसंस्थाले औपचारिक रूपमा औषधि माग गरे वितरण गर्न दिइएको समितिका तदर्थ समिति सदस्य महावीर घिरैयाले बताए। समितिको नयाँ सडकस्थित कार्यालयबाट यस्तो औषधि वितरण भइरहेको र व्यक्तिगत रूपमा भने कमलपोखरीस्थिति जैन भवनबाट उपलब्ध गराउँदै आएको उनले जानकारी दिए।
समितिले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याई औषधि बनाएर प्याकिङ र वितरण गरिरहेको घिरैयाले बताए। समितिका अनुसार, हालसम्म करीब १० लाख जनाका लागि औषधि वितरण भइसकेको छ।
समितिले काठमाडौं, ललितपर, भक्तपुर र विराटनगरमा कोभिड–१९ विरुद्ध नौ वटा होमियोप्याथिक समूह बनाएर परिचालन गरेको छ। समूहमा पशुपति होमियोप्याथिक अस्पताल, अखिल नेपाल होमियोप्याथिक एशोसिएसन, भक्तपुर होमियोप्याथिक मेडिकल कलेज, नेपाल होमियोप्याथिक चिकित्सक संघ, एसियन होमियोप्याथिक मेडिकल लिग, नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषद्, मारवाडी सेवा समिति र नेपाल होमियोप्याथिक हेल्थ अर्गनाइजेशन छन्।
समितिले आफूले बाँडिरहेको आर्सेनिकम एल्बम ३०सी औषधि साइड इफेक्टरहित भएको, सबै उमेर समूहलाई उपयुक्त भएको र जुनसुकै औषधि प्रयोगकर्तालाई पनि हुने बताएको छ। फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने, संक्रमितसँग नजिक हुने तथा संक्रमण लाग्न नदिन उपयोगी भएको समितिले दाबी गरेको छ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागबाट स्वीकृत गराएरै औषधि वितरण शुरू गरेको समितिले जनाएको छ। १० वैशाखमा विभागबाट औषधि प्रयोगको प्रोटोकल बनेर १७ वैशाखदेखि बाँड्न थालिएको समितिको भनाइ छ।
कोभिड–१९ विरुद्ध प्रभावकारी हुने थाहा पाएपछि समितिले बाँडेको औषधिको माग दिनानुदिन बढिरहेको छ। निःशुल्क वितरण भइरहेकाले सबैको पहुँच स्थापित भएर खोजी गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष रमेश डंगोल रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ र कोरोनाको लागि राम्रो हुन्छ भनेपछि स्थानीयबासीलाई वितरण गर्न थालेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले शुरुमा पाँच सय जनाका लागि ल्याएको औषधि एक सातामै सकिएपछि थप पाँच सयका लागि ल्याएर बाँडिरहेका छौं, यो पनि सकिन लागेको छ।”
वडाध्यक्ष डंगोलले औषधि राम्रो भएको र निःशुल्क वितरण गरेको थाहा पाएपछि ल्याएर बाँड्न थालेको बताए।
कोभिड–१९ महामारी विरुद्ध होमियोप्याथिक समूह गठनका संयोजनकर्ता डा. बलराम किसी आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले सिफारिश गरेको र अहिलेको कोरोना महामारीमा उपयुक्त भएकाले प्रयोग गर्न थालिएको बताउँछन्। “यो औषधिले सबै प्रकारको रोग लाग्न नदिने होइन, अहिले कोरोनाभाइरसको जुन लक्षण देखियो, त्यसको असर विरुद्ध काम गर्छ।”
भारतमा कोभिड–१९ महामारी विरुद्ध यो औषधिको राम्रो परिणाम देखिएको डा. किसीकाे दावी छ। उनका अनुसार, त्यहाँ ६ हजार व्यक्तिमा परीक्षण गर्दा औषधि पूरा नखाने ११ जनाको मात्र पोजेटिभ रिपोर्ट आएको थियो।
आर्सेनिकम एल्बम ३० सी होमियोप्याथिक तरिकाबाट बनाएको र १२ सी भन्दा माथि गएपछि साइड इफेक्ट नहुने र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नगर्ने बुझाइ डा. किसीको छ। यो औषधिले कोभिड–१९ संक्रमण हुन नदिन प्रतिरोधी क्षमता बढाउने र संक्रमित देखिएकालाई पनि तीन दिनमै निको पार्ने आफूहरूको अध्ययनबाट देखिएको उनले बताए।
समितिका अनुसार, यो औषधि दुई गोली बिहान खाली पेटमा तीन दिनसम्म र त्यसपछि २ गोली सातामा एक पटक तीन सातासम्म खानुपर्छ।
मारवाडी सेवा समितिमार्फत राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट कोरोना पोजेटिभ देखिएका व्यक्तिमा यो औषधि प्रयोग गर्न दिन चार दिन अघि मात्रै औपचारिक आग्रह गरिएको डाक्टर किसी बताउँछन्। भारतमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको र नेपालमा पनि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने समितिको भनाइ छ।
समितिले एक लाख व्यक्तिलाई पुग्ने औषधि सञ्चित अवस्थामा राखेको छ। राज्यले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिए दैनिक ४ देखि ५ लाख व्यक्तिलाई पुग्ने औषधि तयार पार्न सकिने समितिको भनाइ छ। राज्यले संक्रमित व्यक्तिमा औषधिको परीक्षण गरे यसको उपयोगिता छिटो देखिने र आवश्यक उत्पादन क्षमता बढाउन सकिने समितिसँग आवद्ध होमियोप्याथिक डाक्टर बताउँछन्।
होमियोप्याथिक डाक्टर अम्बिकाप्रसाद ज्ञवाली यो औषधि नयाँ नभई दुई सय वर्षदेखि प्रयोग भइरहेको बताउँछन्। जर्मनीका चिकित्सक डा. सामुयल हानेमानले सन् १७९६ मा ९९ प्रकारका औषधि पत्ता लगाएका थिए। त्यसैमध्येको यो औषधि अहिले कोरोनाभाइरसको लक्षण विरुद्ध उपयोगी देखिएकाले प्रयोग गर्न थालिएको डा. ज्ञवाली बताउँछन्।
सरुवा रोग विज्ञ डा. अनुप सुवेदी भने आर्सेनिकम भएको औषधि प्रयोग गर्न नहुने बताउँछन्। थोरै मात्रामा हानि गर्ने भए पनि वैज्ञानिक परीक्षणविना प्रयोग गर्न नहुने उनको धारणा छ। “परीक्षण प्रमाणित नभएसम्मका औषधि प्रयोग गर्नमा सरकारले रोक्नुपर्छ’’, उनी भन्छन्।
कोरोनाभाइरस पशुमा पनि सर्नसक्ने र औषधिको प्रयोग नै गर्ने हो भने पहिले पशुमा परीक्षण गरेर हेर्नुपर्ने डा. सुवेदीको बुझाइ छ। एलोपेथिक औषधि पनि पहिले पशुमा परीक्षण गरेर सफल भए मात्रै मानिसमा प्रयोग हुने उनी बताउँछन्। “होमियोप्याथिक भन्ने बित्तिकै सजिलै अनुमति पाइने र यसका औषधि परीक्षणविना प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मानव स्वास्थ्यका लागि घातक छ’’, उनी भन्छन्।
नेपाल चिकित्क संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की होमियोप्याथिक औषधिलाई कोभिड–१९ सँग जोडेर वितरण भइरहेकोबारे जानकारी आइसके पनि त्यो आफूहरूको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने बताउँछन्। ‘‘होमियोप्याथिक औषधिबारे होमियोप्याथिक काउन्सिलले हेर्छ, सो औषधिको विषय के कस्तो हो भनेर आधिकारिकता सार्वजनिक गर्न काउन्सिललाई आग्रह गरिसकेका छौं’’, उनी भन्छन्।